फोर्ब्सको धनाढ्य सूचीमा परेका रोहित तिवारीलाई यसरी आफ्नो मााया जालमा पारेकी रहछिन् केकीले, बोल्दा बोल्दै खोलेकी थिइन् यो अन्तरवार्तामा केकीले पोल – Gazabkonews
केकीका हुनेवाला पति रोहित फोर्ब्सको धनाढ्य सूचीमा परेका व्यापारी हुन् अभिनेत्री केकी अधिकारीले लगन गाँठो कस्न लागेका युवक रोहित तिवारी हाम्रोबजार डटकमका सिइओ हुन् ।
आज मेहेन्दीमा रमेकी केकीले उनै तिवारीसँग भोलि (बिहीबार) विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छिन् ।रोहित फोर्ब्सको सन् २०२० मा एसियाबाट ३० वर्षमुनिका धनाढ्यको सूचीमासमेत परेका थिए। उनी फुडमारियोको समेत सिइओ हुन्।
केकी र रोहितबीच केही समयदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको केकीका साथीहरु र आफन्तहरु बताउँछन् ।
यो पनि : माया बिछट्टैमा जिम्बे र लक्ष्मीको अभिनय : गीतकार तथा मोडल जिम्बे राईको नयाँ गीत माया बिछट्टैको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । राईकै शब्द सिर्जनामा तयार पारिएको माया बिछट्टै बोलको गीतमा गायक प्रताप दास र गायिका प्रविशा अधिकारीको स्वर छ ।
गीतमा संगीतकार ऋषि खड्काको संगीत सृजना छ भने विशाल निरौलाको एरेन्ज छ । भिडियोमा मोडल राईसँगै अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवाका अभिनय देख्न सकिन्छ । रंगमञ्चबाट आएकी अभिनेत्री लक्ष्मी र टिकटकबाट आएकी मोडल राईको माध्यमबाट निर्देशक बिक्रम चौहानले एक प्रेमील जोडीको रोमाञ्चक प्रेम कहानीलाई देखाएका छन् ।
सार्वजनिक गीतमा प्रकाश खड्काको छायांकन तथा मिलन विश्वकर्माको सम्पादन छ । किन कमेडियन भारती सिंहले छोराको अनुहार देखाएकी छैनन् ? कमेडी क्वीन भारती सिंह आमा बनेदेखि नै क्लाउड नाइनमा छिन् ।
भारती र हर्ष छोरा ‘गोला’सँग रमाइलो गरिरहेका छन् । भारती सिंह आमा बनिन् तर उनले आफ्नो सानो राजकुमारको अनुहार भने देखाएकी छैनन् । आखिर यसको कारण के हो ? भारती सिंहका फ्यानहरू आफ्नो बच्चाको एक झलक हेर्न आतुर छन् । त्यसोभए भारतीले आफ्नो ‘गोला’ को झलक कहिले संसारसामु प्रस्तुत गर्ने ?
भारती सिंहले आफ्नो पछिल्लो भ्लगमा यसको जवाफ दिएकी छिन् । भारतीले आफ्ना छोराको अनुहार फ्यानका अगाडि देखाउन आतुर रहेको बताइन् । उनको बस चलेको भए छोरा जन्मेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्बिर अपलोड गर्ने थिइन् तर परिवारका सदस्यका कारण भारतीले त्यसो गर्न सकेकी छैनन् ।
भारतीले आफ्नी आमा र सासुले बच्चाको फोटो कसैलाई नदेखाउन आग्रह गरेको बताइन् । बालबालिकाको तस्बिर ४० दिनसम्म सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न नहुने उनीहरुको आमाको भनाइ छ । बुढापाकाको यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै भारती सिंहले छोरा गोलाको अनुहार लुकाउने निर्णय गरेकी छिन् । भारती सिंह भन्छिन् कि यदि ठूलाहरूले यस्तो भनेका छन् भने, केहि भएको हुनुपर्छ।
त्यसैले फ्यानहरू लाई छोरा देखाउन केही दिन पर्खिरहेकी छिन् र छिट्टै कमेडी क्वीन भारती सिंहले आफ्नो बच्चाको तस्बिर अपलोड गर्ने छिन् । छोराको ४० दिन पूरा भएपछि भारती सिंहको क्यूट गोला सबैले देख्न पाउनेछन् । भारतीले भिडियोमा गोला निकै स्वस्थ रहेको पनि बताएकी छिन् । गोलु मोलु जस्तो देखिन्छ ।